जसले १२ वर्षीया सम्झ,नालाई ब ला त्का रपछि ढुं’गा’ले मु’ख’मा हा’नेर मा£रे – Dainik Sangalo
बझाङ , सुदुर समाज । बझाङमा ब ला त्कारपछि मा रिएकी स म्झ ना वि कको ह त्या स्था;नीय युवा राजेन्द्र बो;हराले नै ग;रेको प्रहरीले नि;ष्कर्ष नि;कालेको छ । ब;झाङ म;ष्टा गा;उँपालिका २ की १२ वर्षीया ;बा;लिका स;म्झनाको ह;त्या बो;हराले गरेको अनु;सन्धानबाट खु;लेको प्र;हरीको दा;बी छ । यसअ;घि नै उनले गा;उँकै एक बा;लिकालाई ब;लात्का;र गरेको पा;इएको छ । यसअघि ब;ला;त्का;र भएको घटना गाउँमै मिलाएको कागज समेत प्रहरीले बरामद गरेर सार्वजनिक गरेको छ । बोहराले पहिलो ब;ला;त्का;रको पो;ल गा;उँभ;री नै फै;लिने ड;रले स;म्झ;नाको ब;ला;त्का;र;पछि ह;त्या नै ग;रेको प्रहरीको अनुस;न्धान;बाट देखिएको छ । ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, ******
कसरी भयो ब ला त्का र ?
सम्झना सधैझै घरबाट टाढा रहेको गो ठमा गा ईभै सीलाई घाँ स हा ल्न गएकी थिइन् । घ टना तीन दिन अघि को हो । घाँस हाल्न जं गलको बाटो उ नी सधै ए क्लै जाने गरेकी थि इन् । त्यो दिन पनि उनी ए क्लै गइन् । स धै उन को का मै त्यही थियो । आमा बुवाले अ ह्राउने गरे का थिए । सानी छो री भएपछि मा न्नुको विक ल्प थिए न् । तर बाटो मा प्रा य पछि लाग्ने र फ काएर यौ न स म्पर्क ग र्न खो ज्ने रा जेन्द्र्र त्यो पनि प छि ला गे । उनी स म्झ नाको को मल श रीर चा हन्थे ।
त्यस पनि दिन पनि राजेन्द्र साथी हरुलाई छा डेर स म्झनाको पछि ला गे । जं गलभन्दा केही पर पुगेपछि उनले स म्झ ना लाई बला त्कार प्र यास गरे । तर उ नले मा निनन् । जब र्ज स्ती बला त्कार गरेपछि स म्झ ना चि च्या उन था लिन् । केही समय घ म्साघ म्सी नै पर्यो । तर जब स म्झ नाको आ वाजले गा उँले आउने जो खिम ब ढ्यो । रा जेन्द्र आ;त्तिए ।
ह त्या प छि को दृ श्य
सम्झ ना जं गलको म न्दिरमा अ न्तिम स्वा स लि दै थि इन् । घरमा उ नको खो जी च ल्यो । गो ठमा गा ईगो रुलाई घा स हा ल्न ग एकी उ नी न फर्कि एपछि भो लिप ल्ट मा त्रै उ नको श व न जि कैको म न्दिरभि त्र फे ला प र्यो । श रीर मा आ धा क पडा न भएको । अ नु हा र र क्ता म्मे भ एर ढुं गाले थि चि एको थि यो । श रीरमा को तर का तर परेको अ वस्था मा यौ नी बाट र गत स मेत बगे को दे खि एप छि आ फ न्तले सो झै ब ला त्का रप छि ह त्या भए को आ शंका गरे ।-सुदुर समाजबाट साभार
Prevआजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल असोज १२ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०२० सेप्टेम्बर २८ तारिख
Nextफेरिपनी देशव्यापी कडा लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी ! भर्खरै भयो यस्तो निर्णय..
माटो ख’न्ने क्रममा ढि’स्कोले पु’रिएर तीन महिलाको मृ’त्यु